ပညာရေးဖြင့် အသက်မွေးနေသည့်အတွက် ပညာအမြင်လို့ဆိုသည့်အတွက် အနည်းငယ်တော့ မိတ်ဆွေ ပြုံးယောင်တော့သမ်းမိမည် ထင်ပါသည်။သို့သော် ကျနော်ပြောချင်သည့် ဆိုလိုရင်းကို မိတ်ဆွေ ရေလည်သဘောပေါက် နားလည်မိသည့်အခါ ဒီအမြင်က ဘယ်လောက်...
【 ဆောင်းပါး 】"ပျော်စရာလား ..ရွှင်စရာလား ? …. ဒီတန်ဆောင်တိုင်ကာလ"
မနက်စောစော လမ်းထဲ ဆိုင်းသံဗုံသံ အော်ဂင်သံဘဆူဆူညံကြားရသဖြင့် အထိတ်တလန့်ဖြစ်မိသည်။လမ်းထဲမှ လူအတော်များများမှ တိုက်ခန်း၀ရံတာရှေ့ထွက်ကာ ဘာများလဲဟု စပ်စုကြသည်။ကျနော်သည်လည်း ထိုနည်းတူ ထွက်ကြည့်ရမှ ဘယ်ကလာသည့် လူတွေလဲမသိ...
【 ဆောင်းပါး 】 “မိမိကိုယ်ကို ကောင်းအောင်ကြိုးစားမည်”
“မိမိကိုယ်ကို ကောင်းအောင်ကြိုးစားမည်။မိမိအတန်းကို ကောင်းအောင်ကြိုးစားမည်။မိမိကျောင်းကို ကောင်းအောင်ကြိုးစားမည်။ မိမိတိုင်းပြည်အတွက် ကောင်းအောင်ကြိုးစားမည်။”
ငယ်ငယ်က ကျောင်းတက်လျှင် ဆိုနေကျ ဆောင်ပုဒ်သီချင်...
【 ဆောင်းပါး 】 တစ်ခေတ်တစ်ခါက ကွမ်သဲခြံကြီး
ကွမ်သဲရွာ၊ ခြံကြီးဟုဆိုလျှင် ဒီဘက်ခေတ်လူငယ်များကလွဲ အနီးဝန်းကျင်ရွာများပင် သိကြသည်။ဘာကြောင့် ခြံကြီးလို့ခေါ်သလဲဆိုတော့ ခြံက သိပ်ကိုကြီးလွန်းလို့ဖြစ်သည်။ကားလမ်းမဘေး မျက်နှာစာတန်းပင် မရှိဘူးဆို ပေ ၈၀၀ လောက်တော့ ရှိမည်။...
【 ဆောင်းပါး 】 “အပြောကောင်းတာ ထောင်ချောက်ပါ”
ကျူရှင်ဆရာဆိုတာ အပြောကောင်းတဲ့သူလို့ သတ်မှတ်ကြသည်။သို့သော် တကယ်က ကျူရှင်ဆရာတွေထက် ပိုအပြောကောင်းတာက စျေးရောင်းသူတွေဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် တစ်ပတ်ကျော်က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီကနေ တစ်ဗူးကို ၃၅၀၀ နှင့် ဝယ်ထားသည့် ကြယ...
【 ဆောင်းပါး 】 Facebook ဖြင့် ပျော်မွေ့ရသည့် ဒီအချိန်ခါ
လက်ရှိအခြေအနေမှာ လူတိုင်းက အပြင်ကိုလည်းမထွက်နိုင်၊ အပြင်မှာဖြစ်နေတာတွေနဲ့ မျက်ခြေမဖြတ်နိုင်တဲ့အခါ Facebook ကို ဘဝတစ်ခု နေ့စဉ် လူနေမှုဘဝတစ်ခုလို သဘောထားပြီး နေထိုင်ဖြတ်သန်းနေရသလို ဒီ Facebook လို့ခေါ်တဲ့ လူမှုကွန်ရက်...